Shiinaha Customized Bacda-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Bacda duffle Bacda duffle > Bacda isboortiga
1. Sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan boorsada isboortiga?
(1) Boorsadan isboorti waxay ka sameysan tahay maro naylon Oxford oo aan biyuhu xirin.
(2) Kabo gooni ah iyo Waxyaabaha la masaxo: Bacdan jimicsiga oo leh qeyb kabo leh ayaa hawo qaboojinaysa si ay ugala soocdo kabaha iyo qalabka wasakhda ah ee ka soo baxa waxyaabaha nadiifka ah.Waxaa sidoo kale jira bac dheeraad ah oo aan biyuhu xirin oo lagu keydiyo waxyaabaha qoyan, gaar ahaan tuwaallo qoyan ama jeebadaha dharka lagu maydho, taas oo ah aad u habboon oo sahlan in la nadiifiyo.
(3) Cufan oo waara: Wax tayo sare leh oo nylon u adkaysta nalka oo leh naylon xoog leh, sidaa darteed waligiis kuma jeexmi doono dusha sare, waxaan u isticmaalnaa jiinyeer tayo sare leh oo tayo sare leh jeeb kasta, sidaa darteed waligaa ma dareemi doontid dhibaatooyinka jiinyeerka. faahfaahin kasta si loo sameeyo dhammaan boorsada isboortiga oo tayo sare leh. (4) Iftiin iyo raaxo leh: boorso duffel aad u fudud, oo aan ahayn naqshad aad u tiro badan. Xadhko la hagaajin karo, si aad ugu dhejiso dhererkaaga, ama waad iska bixin kartaa oo kaliya isticmaal xarkaha gacanta lagu hayo, iyo suufka dul saaran xarkaha ayaa ka dhigaya kuwo raaxo leh inay xirtaan iyagoon qoorta kaa dhaawicin.
(4) Iftiin iyo raaxo leh: boorso duffel aad u fudud, oo aan ahayn naqshad aad u tiro badan. Xadhko la hagaajin karo, si aad ugu dhejiso dhererkaaga, ama waad iska bixin kartaa oo kaliya isticmaal xarkaha gacanta lagu hayo, iyo suufka dul saaran xarkaha ayaa ka dhigaya kuwo raaxo leh inay xirtaan iyagoon qoorta kaa dhaawicin.
(5) adeegga iibka kadib: waxaan bixinaa damaanad nololeed, illaa intaad la kulanto dhibaatooyinka tayada, fadlan nala soo xiriir annaga oo amraya, wax walwal ah ma qabno markaad wax iibsaneyso!
(6) Ku habboon jimicsiga ama nashaadaadka isboortiga: Boorsadan waxaa loo isticmaali karaa jimicsi, isboorti iyo waxqabadyo dabaal ah, iyadoo leh qol ku filan oo lagu xareeyo kabaha, dharka dabbaasha, sabeynta iyo bambooyin. waxaa jira jeebado badan oo wax ku ool ah, sidaa darteed waxaan si fudud uga furi karnaa taleefannada gacanta, furayaasha, boorsooyin iyo waxyaabo kale oo qiimo yar. Waxyaabaha ku jira boorsadani waa mid aad u fudud oo xoog badan.
(7) Wanaagsan safarka: Waxaad u qaadan kartaa boorsadan meel kasta adigoon ka walwalayn inaad uga tagto booska boorsada.Waxay ku imaaneysaa suun garabka (oo leh garabka garbaha), gacantuna waxay leedahay barkimo jilicsan oo ku taal dusha sare ee boorsada si fudud loo qaado. cabirkaani wuxuu ku habboon yahay diyaaradaha, safarka, iyo boorsooyinka.Waxaa jira dhowr qaybood oo kala go 'ah, way fududahay in gudaha la soo galo si loo abaabulo ama loo soo qaado waxyaabaha la keydiyay. fududahay in lagu isticmaalo qalabka safarka.
2. Xuduudaha alaabta (qeexitaanada) bacda isboortiga.
3. Maxaan tixgeliyaa ka hor intaanan iibsan boorsada isboortiga?
(1) Haddii aad safreyso ama aad aadeyso qolka jimicsiga, boorsooyinka jimicsiga waa hab fiican oo alaab aad ku qaadan karto. ku hay meel kasta, wakhti kasta.Waad ku mahadsan tahay boorsada jimicsiga, taasi maahan wax dhibaato ah. Shandaddu waa jilicsan tahay, sidaa darteed waxay soo qaadan kartaa waxyaabo badan waxayna geli kartaa meelo kala duwan.
(2) Waxyaabaha ku jira boorsadaada jimicsiga ayaa ka muhiimsan sida aad u maleyneyso. Maaddadu waxay go'aamineysaa oo keliya sida ay nadiif u tahay bacda, laakiin (ka sii muhiimsan) sida ay u sii waari karto. xitaa wuu ka xoog badan yahay tolmo adag iyo xarkaha taageerada adag.
(3) Qaar ka mid ah bacaha isboortiga wax badan ayey xirxiran karaan oo ay u dhowdahay in aan la qaadi karin maxaa yeelay horay ayaad u buuxsantay. Tani waxay xitaa u horseedi kartaa dhaawacyo dhabarka ah, taas oo aan ahayn waxa aad rabto. Waxaa ka mid ah gacan qabasho ku habboon iyo suurtogal ahaan duubis, si aad bacda ugu rogi kartid bidix iyo midig In kasta oo giraangiraha ay ku darayaan mugga shandaddaada, haddana waa u qalantaa mugga dheeriga ah haddii aad qorsheyneyso inaad alaab culus qaado.
(4) Bacaha waaweyn ee isboortiga waxay qaadi karaan in ka badan 155 litir, oo u dhiganta waxyaabo badan.Sidaa darteed haddii aad u baahato boorso qaadi kara daloollo fara badan, u tag boorso jimicsi oo ballaaran. jimicsi ama jimicsi degdeg ah, waxaad isticmaali kartaa boorso jimicsi oo yar si aad ugu kaydiso waxyaabaha aad ugu baahan tahay jimicsigaaga ama habeenkii.
(5) Kahor intaadan go'aansan inaad mid iibsato, fadlan tixgeli qodobo kala duwan, sida ujeedada, helitaanka, adkeysiga, moodada, qiimaha iyo tayada boorsada. Fiiri astaamaha aasaasiga ah sida awooda, nidaamka xirida iyo xirmooyinka.
5. Baakadaha iyo rarida bacaha isboortiga
(2) Xajmiga cabbirka ee caadiga ah: 42cm dheer X 27cm sare X 25cm ballaaran, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 45cm X26cm X 45cm.10PCS / box.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) FCL miisaanka guud: 10KG.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 8.5kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan qaabeyn doonnaa habka xirxirashada boorsadaan baseball iyadoo la raacayo shuruudahaaga.
(9) Hadaad ubaahantahay shaybaarka boorsadan baseball-ka, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(3) Ka dib iibinta muunadaha. Haddii nooca ugu horreeya u baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa shaybaarrada sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka, iyo dhammaan hannaanka soo saarista nooca labaad ee shaybaarka waa gebi ahaanba lacag la'aan.
Q4: Ma dooneysid naqshadeynta alaabtayada, miyaad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
Calaamadaha kulul: Boorsada isboortiga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, loo habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka